Nepali call girls in Pokhara
Topic: Nepali call girls in Pokhara
Author Topic: Nepali call girls in Pokhara (Read 12836 times)
« on: December 17, 2006, 11:01:20 AM »
This was 2006 post
Read the latest post below.
Feb 25, 2018 - Restaurant Girls in Pokhara
Nepali call girl racket in Pune: NGO
Thursday December 14, 03:25 PM
Kathmandu, Dec 14 (IANS) A housing estate in India's Pune town is the centre ofacall girl racket involving Nepali women, an NGO here has said.
Maiti Nepal, one of Nepal's best-known private groups working to prevent trafficking in women and children, says traffickers were runningabrothel fromaflat inaPune building.
The brothel is said to be owned byaNepali woman Sangeeta Tamang, known among her clientele as Saili, who along with eight others were caught near the Indo-Nepal border earlier this week and handed over to Kathmandu police.
Prabha Khanal, Maiti Nepal's coordinator for the western region, told journalists that four of the detainees have confessed to being involved in trafficking Nepali girls and forcing them into prostitution in India.
Maiti Nepal keeps vigil in the border towns of Nepalgunj, Rupandehi, Dhangadi and Mahendranagar, which see hundreds of people crossing over from Nepal to India or vice versa, to deter human trafficking.
About two years ago, they helped border police arrestawoman called Maitia Tamang, who was also involved in the racket.
The NGO also managed to rescue three women from the brothel.
On Sunday, some of the rescued girls spotted Saili crossing into Nepal from the Indian border town of Sunauli and informed Maiti Nepal. The NGO alerted police and the group was caught as they crossed over.
Besides Saili, the three others who reportedly confessed to runningatrafficking network and luring Nepali girls with job offers are Sanak Bahadur Tamang, Mangale Tamang and Bir Singh Tamang.
Every year, hundreds of Nepali women and children are trafficked to India, where they are sold to brothels, circuses and carpet industries.
Some are also sold into domestic slavery, becoming servants with meagre pay and made to work nearly 18 hoursaday.
« Last Edit: February 25, 2018, 08:53:17 PM by anand »
Call girls in Pokhara
« Reply #1 on: February 25, 2018, 08:49:52 PM »
I am writingareport on call girls in Pokhara
First in the series : Restaurant girls
Read here - https://xnepali.net/sex-workers-in-pokhara-restaurant-girls-part-1/
Re: Nepali call girls in Pokhara
« Reply #2 on: February 25, 2018, 09:00:43 PM »
« Reply #3 on: February 26, 2018, 03:22:10 AM »
पोखरा नेपालकै एउटा सुन्दर सहर हो। यही सुन्दर नगरमा एउटा बद्‍‍नाम बजार पनि छ। धेरै भएको थियो यहाँको बदनाम बाग्लुङ बसपार्क बजारको चर्चा सुनेको। तर त्यहाँ के देखिन्छ, हेर्न भने पाएको थिइनँ। बद्‍नाम बजार भएकोले त्यहाँ हतपत साथीहरु जान पनि मान्दैनन्। यस पटक पोखरामा रहँदा भने मौका जुर्‍यो। मोटरसाइकलबाट एकछिन त्यहाँको दृश्य बाहिरबाट सर्सर्ती हेर्दा नै लाग्यो- अहो, नेपालमा यस्तोसम्म भइसकेछ है, खुल्लमखुल्ला देहव्यापार! हिन्दी फिल्महरुमा देखाइने कोठी भएको गल्लीभन्दा कम थिएन दृश्य। केही फोटो हेरौँ। यी फोटो फोनमा कुरा गरेको बहानामा मोटरसाइकल चढ्दाचढ्दै खिचिएका हुन्। गोपनीयताका कारण अनुहार धमिलो बनाइएको छ।
देहव्यापारका लागि भारतको कुख्यात ठाउँको दृश्य डकुमेन्ट्री र फिल्महरुमा देख्न पाइन्छ। आफ्नै आँखाले भने एक पटक दक्षिण कोरियाको दस दिने यात्रा गर्दा देखेको थिएँ।
कोरियामा अध्ययनरत साथीहरुले सब कुरा हेर्नुपर्छ, जाऔँ हेर्न भन्दै एक रात सउलको एउटा बदनाम बजार घुमाउन लगेका थिए। भद्दा मेकअप पोतेका महिलाहरु पसलहरु बाहिर उभिएर ग्राहक बोलाउँदै थिए।
अचम्म लाग्यो, बाग्लुङ बसपार्क छेवैको एउटा बजारमा पनि पूरै त्यस्तै देखियो। देहव्यापारमा कानुनी प्रतिबन्ध रहेको देशमा यसरी खुल्लमखुल्ला ग्राहक बोलाउँदै गरेको देख्दा अचम्म मान्दै थिएँ, एउटी युवतीले डाकिहालिन्, दाइ जाने हो ?
त्यसपछि त टाप !
केही अघि पोखराको लेकसाइडमा होटल होटलमा छापा मारेर जोडीहरुलाई प्रहरीले पक्रेको थियो। होटलमा बसेका लोग्नेस्वास्नी पनि परे भन्ने कुरा समेत आएको थियो। कोठाभित्र बसेका जोडीहरुलाई समात्ने प्रहरीले खुल्लमुखल्ला देहव्यापार गरेको चाहिँ किन नदेखेका होलान्।
यो दृश्य देखेपछि छ वर्षअघि नै पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सुन्दर श्रेष्ठले नेपालमा सेक्स टुरिजमको विकास गर्नुपर्छ भनेर किन भनेका रहेछन् भन्ने महसूस भयो।
उतिबेलै इकोनोमिस्टमा छापिएको एउटा लेखमा दक्षिण एसियाको यौन व्यापारका सम्बन्धमा विज्ञ भन्दै जोन फ्रेडेरिकले “एक दशकअघिसम्म नेपालमा यौन उद्योग भूमिगत थियो। तर अहिले यो ब्याङ्कको जस्तो, नोमपेन्हको जस्तो भएको छ” किन भनेका रहेछन्, त्यही दिन थाहा भयो। आफूले नदेखेसम्म केही कुरा हुँदै नभएको भन्नेहरु कति गलत रहेछन् बुझियो।
किन त्यहाँका बासिन्दाहरु बाग्लुङ बसपार्क जान नपरे हुन्थ्यो ठान्दा रहेछन्, त्यही दिन बुझियो। महिलाको त कुरै छाडौँ, पुरुषसमेत त्यो ठाउँमा यसो कतै देखियो भने बद्‍नाम हुँदा रहेछन्। यहाँ कतिलाई फोटो मात्र हेर्दा लाग्ला, ती त्यस्तै हुन् भन्ने कसरी बुझियो त ? किनभने तीमध्ये केहीले त आफै हामीलाई बोलाएका थिए। नपत्याए तपाईँ पनि त्यो क्षेत्रमा एक पटक अवलोकन गर्न जान सक्नुहुन्छ।
यति खुल्लमखुल्ला भइरहेको अवैध कामलाई कि त नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो, त्यो नसकिने भए नियमन त गर्नुपर्‍यो नि।
साभार : माई संसार
« Reply #4 on: February 26, 2018, 03:27:44 AM »
2008 news article
from trek to sex page 1.jpg (249.84 kB, 772x718 - viewed 410 times.)
from trek to sex page 2.jpg (134.27 kB, 802x399 - viewed 431 times.)
« Reply #5 on: February 28, 2018, 12:06:16 AM »
खुल्लमखुलाः राजधानीको ठमेलस्थित एक डान्सबारमा प्रस्तुत 'टपलेस' नृत्य।
मोडलः प्रनिशा सिलवाल र आशिष महर्जन
आधुनिकतासँगै बढ्दो यौन गतिविधिलाई परम्परावादी नेपाली समाजले बडो असहजताका साथ पचाउन खोजिरहेको छ।
साँझ ६ बजेतिर ललितपुर, कुमारीपाटीस्थित एक रेस्टुरेन्टको टेबुलमा बसेका १५/१६ वर्षका दुई जोडी केटाकेटी एकापसमा चुम्बन गर्न थाल्छन्। खानेकुरा खाँदै टीभीमा विश्वकप फूटबलको हाइलाइट हेरिरहेका अरू टेबुलका ग्राहकहरूलाई स्कूल डे्रसमै रहेका ती केटाकेटीको चर्तिकलाले अप्ठ्यारोमा पार्छ।
काठमाडौं, सुन्धाराको एक रेस्टुरेन्टमा लोकदोहोरी चलिरहेको छ। प्रायः सबै टेबुलका ग्राहकहरूसँग अर्धनग्न केटीहरू टाँसिएर बसेका छन्। मोलतोल चलिरहेको एउटा
टेबुलकी केटीले आफ्नो रेट बताउँछिन्, “मेरै फ्लाटमा जाने भए ५ हजार।”
ठमेलको एउटा डान्सबारमा १५/१६ वर्षका किशोरकिशोरीदेखि ५५/६० वर्षेहरूको खचाखच भीड छ। उत्तेजक हिन्दी गीतमा नाचिरहेका अर्धनग्न डान्सरहरूले बाहिरी पहिरन फाल्न थालेपछि उनीहरूलाई पानी र बियरले भिजाउन थालिन्छ। नर्तकीहरूले अन्त्यमा भित्री पहिरन समेत फ्याँकिदिंदा हल सुसेली र तालीले गुन्जायमान हुन्छ।
७ असार अपरान्ह तीन बजे मोटरबाइकमा भक्तपुर, जगाते नजिकैको एउटा गेष्ट हाउसमा आएको एक जोडीले प्रतिघन्टा रु.५०० का दरले दुई घण्टाका लागि कोठा मिलाए।
असारको तीन सातामा राजधानी उपत्यकाका केही स्थानमा देखिएका यी दृश्यले 'मोर्डन' बन्ने धुनमा समाजमा यौन व्यवहार खुलेआम बन्न थालेको आभास दिन्छ। खासगरेर नयाँ पुस्ताको यस्तो 'आधुनिकता' देखेर असहज मानिरहेको खुल्लापनउन्मुख नेपाली समाज यो सब नदेखेझैं गरिरहेको छ। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल समाजले अब 'सेक्स' गुपचुप र रहस्यको विषय नरहेको स्वीकार्ने उदारता देखाइरहेको बताउँछन्।
नेपाली समाजलाई १०४ वर्ष 'अनुशासन' मा राखेका राणा शासकहरूको यौन गतिविधिका किस्साहरू २००७ सालपछि सर्वसाधारणले सुन्न थालेका थिए। काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्गमा सीमित त्यो 'खुल्लापन' २०४६ सालपछि भने सर्वसाधारणमा पनि भित्रिन थाल्यो। गत दुई दशकमा फस्टाएको उद्योग व्यापार, सूचनाप्रविधि, वैदेशिक रोजगारी र अरू किसिमका 'एक्सपोजर' हरूले नेपाली समाजलाई गतिशील बनाएसँगै खुल्लापनको भरपुर उपयोग हुन थालेको छ।
विभिन्न सेलिब्रेटीहरूको यौनजन्य व्यवहार सम्बन्धी सामग्री छापिएका पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूको लोकप्रियतालाई मापदण्ड मान्ने हो भने त यौनको मामिलामा नेपाली समाज पूरै खुलेको देखिन्छ। जिल्ला जिल्लामा 'सेक्स टोय शप' हरू खुल्न थालेका छन्भने होटल–रेस्टुरेन्टदेखि कफी शपसम्ममा देखिने, सुनिने यौनका कुरा र गतिविधिले नेपाली समाजभित्रको गोप्य पाटोलाई छताछुल्ल बनाएको छ। (हे. देहव्यापारको छुट्टै रिपोर्ट र फोटो फिचर) गर्लफ्रेण्ड–ब्वाईफ्रेण्ड बनाउने र 'नाइट स्टे' गर्नेदेखि लिभिङ टुगेदरसम्मका चलन नेपाली शहरको जीवनशैली बनिसकेको छ। यसरी ह्वात्तै बढेको यौन गतिविधिमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट प्रविधिको ठूलो भूमिका छ।
गएको फागुन अन्तिम साता हिमाल ले राजधानीसहित देशका ठूला १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत उत्तरदाताले यौनमा समाज उदार बन्दै जानुमा इमेल–इन्टरनेट र मोबाइलको मूल भूमिका रहेको बताएका थिए। सर्वेमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशतले पत्र–पत्रिकामा सबभन्दा पहिले यौन सामग्रीमा आँखा जाने बताएका थिए भने ५० प्रतिशतले 'रेडलाइट एरिया' को आवश्यकता औंल्याएका थिए।
« Reply #6 on: February 28, 2018, 12:08:33 AM »
उदार कि असहज
अघोषित 'रेडलाइट' काठमाडौंको रत्नपार्क आसपासमा यसरी ग्राहक कुरेर बस्ने महिला यौनकर्मीलाई कण्डम बाँड्दै तारादेवी खड्का।
आजका तन्नेरीमा 'लभ, सेक्स र ट्रेजेडी' जस्ता कुरा सामान्य भएका छन्। मनोविज्ञ डा. गंगा पाठकका अनुसार, प्लस टु पुस्तामा ब्वाईफ्रेण्ड–गर्लफ्रेण्ड नहुनुलाई कमजोरीको रूपमा लिन थालिएको र जोडी नहुनेहरूले हीनताबोध गर्न थालेका छन्। यस्तै, समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल डेढ–दुई दशकअघि डरलाग्दो मानिने बिहे पूर्वको यौन सम्बन्ध र सम्बन्धविच्छेदको कुरा अहिले सामान्य भएको बताउँछन्। “अहिलेका आमाबुबाले छोराछोरीको 'प्राइभेसी' लाई मह140व दिन थालेका छन्”, दाहाल भन्छन्, “पहिलेको 'कुमारीत्व' को कुरा अहिले 'सेफ सेक्स' मा आइपुगेको छ।”
पहिले कण्डमको विज्ञापनमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन भनिन्थ्यो, अहिले 'सेफ सेक्सको लागि कण्डम' भनिन्छ। मानवशास्त्री ढकाल 'सेफ सेक्स' का विभिन्न उपायदेखि २४ घण्टाभित्र खाने चक्कीसम्मका विज्ञापनले 'मन मिले जोसँग पनि यौन सम्बन्ध राखे हुन्छ' भन्ने सन्देश दिइरहेको र त्यो आपत्तिजनक हुन छाडेको बताउँछन्। ढकालको विचारमा, समाजले यतिका कुरा स्वीकारिसकेपछि नीतिनिर्माताहरूले कथित नैतिकताको पाखण्ड छाडेर यौन गतिविधिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ।
मस्तीः पर्यटकीय शहर पोखरामा भएको विकिनी डान्स पार्टी।
अघिल्लो पुस्ताले 'छाडापन या उच्छृङ्खलता' मान्ने गरेको यस्तो खुल्लापनले धेरैलाई तनाव पनि दिइरहेको छ। व्यक्तिगत जस्तो लाग्ने यस्तो तनावले समाजको एउटा ठूलो हिस्सालाई पिरोल्न थालेको मनोविज्ञ डा. पाठक बताउँछिन्। उनको विचारमा, समाजले देखेर, अनुभव गरेर पनि थाहा नपाए जस्तै गरिरहेको यो अप्ठ्यारो खुलापनको दुरुपयोगबाट आएको हो। हुन पनि, नेपाली समाजमा आधुनिकता र खुलापनको आगमन यति अपेक्षित भएको छ कि, 'केटा र केटी साथी हुनै सक्दैन' भन्ने जमाना भोगेर आएका आमाबाबु छोरीले 'ब्वाईफ्रेण्ड' लिएर आउँदा सत्कार गर्न तयार भएका छन्। “खुला यौन गतिविधिलाई नै आधुनिकता ठान्ने एउटा पुस्ता भने समस्याको रूपमा देखिंदैछ”, डा. पाठक भन्छिन्।
तीन महीनाअघि काठमाडौंको एउटा प्लस टुका शिक्षकले ८ कक्षाका ६ छात्रछात्रालाई नजिकैको साईबर क्याफेमा पोर्न साइट हेरिरहेको अवस्थामा भेट्टाए। त्यो समूहलाई एञ्जिला (नाम परिवर्तन) ले त्यहाँ लगेको थाहा भएपछि कलेज प्रशासनले उनका अभिभावक बोलाएर 'काउन्सिलिङ' गराउन सल्लाह दियो। तर, १४ वर्षकी एञ्जिला आफूले कुनै गल्ती नगरेकोमा दृढ छिन्। “त्यस्तो साइट सबैले हेर्छन्, हामीले हेर्दा के भो त?” उनको भनाइ छ। यसले समाजभित्रको एउटा पुस्तामा गलत 'जजमेन्ट' र जिद्दी हावी हुन लागेको संकेत गर्छ।
« Reply #7 on: February 28, 2018, 12:10:31 AM »
मनोविज्ञ डा. पाठक इन्टरनेटबाट रातभर 'पोर्न' साइट हेर्ने र ब्वाईफ्रेण्ड–गर्लफ्रेण्डसँग 'सेक्स च्याट' गर्ने कुलतमा फँस्नेको संख्या पनि नजानिंदोगरी बढिरहेको बताउँछिन्। अभिभावकहरूले नयाँ पुस्ताको हातहातमा मोबाइल र ल्यापटप थमाइदिंदा प्रविधिको दुरुपयोग बढेको बताउने डा. पाठक आफ्ना छोराछोरी बिहान ढीला उठ्न थाले भने अभिभावकहरू चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।
विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा संलग्न रिन्छेन योञ्जन बिभिन्न किसिमका टेलिभिजन च्यानल र इन्टरनेटका कारण आधुनिकताभन्दा पनि उत्ताउलोपन बढेको बताउँछिन्। घरपरिवार र विद्यालयमा यौनबारे खुलेर छलफल हुन अझै बाँकी रहेको र मार्गनिर्देशनको अभावमा उच्छृङ्खलता र आधुनिकता छुट्याउन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ। “२०६०/७० को दशकमा काठमाडौंमा झयालबाट हेराहेर गरेर मन परापर हुनुलाई प्रेम भनिन्थ्यो”, योञ्जन भन्छिन्, “अहिले त पहिले डेटिङ र सेक्स अनि मात्र मन परे लभ अनि बिहे नभए, अर्को पार्टनरको खोजी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।”
सोच र मोज नामक पुस्तकका लेखक समेत रहेका पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य पहिले पुरुषहरूलाई मात्रै भएको खुल्लापनमा अहिले महिला पनि थपिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, छोरीलाई एक्लै घरबाहिर जान नदिने समाजले बिहे गर्ने वेला हुँदा 'तिम्रो ब्वाईफ्रेण्ड' छ, छैन? भनेर सोध्न थालेको छ। “यो राम्रो विकास हो, तर यही विन्दुमा नेपाली समाज र खासगरेर नयाँ पुस्तामा अलमल देखिएको छ”, शाक्य भन्छन्, “यो समस्यालाई शिक्षा र सुसंस्कारबाट न्यून गर्नुपर्छ।”
दुई वर्षअघि ७ जोडी स्कूले केटाकेटीले नवलपरासीमा 'किस प्रतियोगिता' गरेको ८ मिनेट लामो भिडिओ अझै पनि केही अनलाइन, साइट र कतिपयका मोबाइलमा पाइन्छ। आफूलाई परिवार र समाजप्रति जिम्मेवार ठान्ने जो कोहीलाई १४–१६ वर्षका ती केटाकेटीले अर्धनग्न अवस्थामा देखाएको चर्तिकलाले सोच्न बाध्य बनाउँछ। मोबाइलको दुरुपयोग गर्दै खिचिएका यस्ता भिडियोहरूले धेरैको घरबार र 'करिअर' चौपट बनाएको पनि छ।
नेपाली समाज तीन पुस्ता (हजुरबा–हजुरआमादेखि नाति–नातिनासम्म) को सोच बोकेर गतिशील भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बढेको खुल्ला यौन व्यवहारले घर र समाजको पिंढीबीच द्वन्द्व बढाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन्। हुन पनि, नेपाली समाज र परिवारमा पुरानो काइदा–कानूनका हिमायतीहरूको काखमा हुर्केकाहरू नै अहिले समलिङ्गी र लेस्वियनसम्मका यौन सम्बन्धलाई सामान्य मान्ने भएका छन्। यसबाट अघिल्लो पुस्ता स्तब्ध भएको डीआईजी भण्डारी बताउँछन्। “विभिन्न यौन काण्ड मच्चाउने सेलिब्रेटीहरूले सस्तो प्रचारका लागि यौन सम्बन्धका अनुभव मिडियाबाट प्रचार गर्दा पछिल्लो पुस्तालाई विकृत र अघिल्लो पुस्तालाई स्तब्ध पारिरहेको छ”, भण्डारी भन्छन्।
खुल्ला कि छाडापन
सिने हिरोइन प्रियंका कार्कीले 'डाइनिङ टेबलमा सेक्स गर्दा बढी आनन्द आउने' आफ्नो यौन अनुभव एउटा साप्ताहिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिन्। त्यसअघि मोडल स्मिता थापाले 'मलाई लोग्ने हैन, लोग्नेमान्छे भए पुग्छ' भन्दै 'हट' अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। चर्चामा आउन गरिने यस्ता 'पब्लिसिटी स्टन्ट' हरूले मिडियामा राम्रो ठाउँ पाउने गरेको छ। “सही र गलत छुट्याउन नसकेर बोलेको यस्ता 'स्टुपिड' कुराहरूलाई मिडियाहरूले मसला बनाउँछन्”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “तर, आधुनिकता र खुलापन भनेको नाङ्गै दौडिनु होइन।”
समाज आधुनिकतातिर लम्के पनि चेतनास्तर नबढ्दा यस्तो छाडापनले प्रश्रय पाएको ठान्ने ढकाल नयाँ पुस्ताले आधुनिक जीवनशैलीको अवसर पाएको, तर त्यस अनुसारको संस्कार विकास नहुँदा 'सेक्स', फेशन र मस्तीलाई नै जीवन ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। छोराछोरी अस्वाभाविक रूपमा खर्चालु र उन्मुक्त भएको देख्दादेख्दै पनि बाबुआमाले नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई शहरीकरणको एउटा प्रवृत्ति भन्ने समाजशास्त्री दाहाल आधुनिकताको नाममा बिहे नगरी सँगै बस्नेहरू बच्चा जन्मिएर समस्यामा पर्नुलाई चेतनाहीनताको उदाहरण मान्छन्।
पैसाको लागि जे गर्न पनि तयार हुने, बूढाबूढीको अनादर गर्ने, सानै उमेरमा बिहे गरेर जोडी फेर्दै हिंड्ने प्रवृत्तिलाई आधुनिकता ठान्ने जमातप्रति चिन्तित पत्रकार किशोर नेपालले प्लस टु पुस्तालाई सही 'काउन्सिलिङ' को खाँचो रहेको बताए। छोराछोरी ढीलो घर फर्कन थाल्दा उनीहरू 'मोर्डन' भएको नसोच्न नेपालको सल्लाह छ। (हे. बक्स)
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा, हनुमानढोकाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ओम अधिकारी स्कूले उमेरमै प्रेमी–प्रेमिका बन्ने र बिहे नगरी सँगै बस्ने चलनले छाडापन मात्र होइन, अपराध पनि बढाएको बताउँछन्। खुल्लापनसँगै देखिन थालेको जथाभावीले राजधानी लगायतका शहरहरूमा यौनको किनबेच बढाएको डीएसपी अधिकारीको भनाइ छ। प्रहरीले वेलावेला होटल, गेष्ट हाउसहरूमा छापा मारेर 'आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेको' भन्दै जोडीहरूलाई समात्ने पनि गरेको छ, तर यौन गतिविधि हुने भाडाका निजी घर, अपार्टमेन्ट र तारे होटलहरूमा प्रहरीको पहुँच छैन।
काठमाडौं लगायतका शहरहरूका निजी घर, तारे होटल र अपार्टमेन्टहरूमा हुने यौन धन्दामा नेपाली केटी मात्र होइन, चिनियाँ र रसियन 'कल गर्ल' सम्म संलग्न छन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोका काठमाडौंमा रहँदा आफूले ठमेल क्षेत्रमा सक्रिय रसियन 'कल गर्ल' हरूलाई कारबाही गरेको बताउने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठ राजधानीमा यौन कारोबार नियन्त्रणको साटो फैलँदै गएको बताउँछन्।
« Reply #8 on: February 28, 2018, 12:11:56 AM »
मानवशास्त्री ढकाल उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीचको राजीखुशी यौन सम्पर्कले समाजलाई कुनै असर नगर्ने, तर यौनको किनबेचलाई त्यही नजरले हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, यौनको किनबेचलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्। “तर, वेश्यावृत्ति मज्जाले चलिरहे पनि यहाँ 'रेडलाइट एरिया' स्वीकार्य भएको छैन”, ढकाल भन्छन्, “हामीलाई भित्र खोक्रिए पनि बाहिर नैतिकवान देखिनु जो छ।”
राजधानीको एउटा कलेजमा स्नातक गरिरहेकी २२ वर्षीया सुमिता (नाम परिवर्तन) मोबाइल फोन चलाउँदा चलाउँदै आत्तिएर ढलिन्। कारण थियो– फेसबुकमा कसैले पोष्ट गरेको उनको टाउको जोडेको नाङ्गो फोटो। फोटोसँगै 'यो केटी वेश्या हो, जसले सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ' भनेर लेखिएको थियो। जेठ अन्तिम साता भएको यो घटनामा सुमिताले अनिशा नामकी युवतीमाथि आशंका गरेपछि अनुसन्धान भयो। सँगै पढ्ने सुमिता र अनिशाको एउटै केटासँग 'अफेयर' रहेछ। त्यो झगडाका कारण कलेज नै छाडेकी अनिशाले फेसबुकमा त्यस्तो फोटो पोष्ट गरेकी रहिछन्।
राजधानीमै सरकारी जागीरे रहेका एक युवकले अर्कैसँग बिहे गरेकी प्रेमिकालाई तनाव दिन पहिले सँगै खिचाएका निजी तस्वीरहरू पटक–पटक फेसबुकमा राखिदिए। त्यो उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय अपराध महाशाखा, हनुमानढोकाको साइवर सेलका इन्स्पेक्टर पशुपति राय ती फोटोहरूका कारण युवतीको घरबार भाँडिइसकेको बताउँछन्। हिजोआज फेसबुकमा अन्तरंग सम्बन्धका तस्वीर वा भिडियोहरू राखेर कानूनी कारबाहीमा पर्ने, पढाइ, जागीर वा वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्नेको संख्या निकै बढेको इन्स्पेक्टर राय बताउँछन्।
'समाज नै ढोंगी छ'
नेपाली समाज दोहोरो चरित्रमा रमाउन खोज्छ। होटल खोल्न दिइन्छ, तर कोही त्यहाँ जोडी लिएर सुत्न गयो भने समातेर जात्रा गरिन्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र, नेता र अरू सबै रुढिवादी छन्। सरकार समलिंगी अधिकार दिन्छ, तर 'रेडलाइट एरिया' तोक्दा बर्बाद हुने ठान्छ। छोराछोरी राति अबेर घर आउँदा उनीहरू 'मोडर्न' भए भनिठान्ने बाबुआमा पनि यहीं छन्।
काठमाडौंमा 'वाइफ स्विपीङ' (श्रीमती साटासाट) गर्नेहरू उहिल्यैदेखि थिए। राणा, शाह घरानियाँहरू अमेरिकाबाट 'प्ले ब्वाई', 'पेण्ट हाउस' जस्ता पत्रिका मगाएर हेर्थे। समाजको एउटा वर्गले डलरमा किनेर पढिरहेको सामग्रीलाई मैले साप्ताहिक र शुक्रबार मार्फत आम समूहमा पुर्‍याउँदा धेरैले 'अश्लील' भने, अझै भन्छन्। तर, त्यसो भन्नेहरूकै घरमा एउटा अंक चार प्रति पुग्छ। बाबु, आमा, छोरा र छोरी सबैले किनेर पढ्ने यी पत्रिका निकै लोकप्रिय भएका छन्।
१२ शहरको सर्वे
यौनमा सबैको चासो
यौनप्रति नेपाली समाजको बदलिंदो धारणा पहिल्याउन हिमाल ले गत फागुनमा काठमाडौं, दमक, धरान, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, काठमाडौं, पोखरा, बुटबल, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढीमा गरेको सर्वेक्षणमा १८ देखि ७० वर्षसम्मका ३७४ जना सहभागी थिए। तीमध्ये ५८ प्रतिशतले पत्र–पत्रिका हेर्दा सबभन्दा पहिले यौन सम्बन्धी सामग्रीमा आँखा जाने बताए। यो समूहमा पुरुष ६७.४ प्रतिशत र महिला ४२.४ प्रतिशत थिए। पत्रपत्रिकामा यौन सम्बन्धी सामग्री कत्तिको पढ्ने गर्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा नियमित पढ्ने गरेको बताउनेमध्ये ७९.३ प्रतिशत १८–२४ वर्ष उमेर समूहका थिए। २५–३९ उमेर समूहका ६७.६ प्रतिशत र ४०–५९ समूहका ४२.९ प्रतिशतले पत्र–पत्रिकाका यौन सामग्री पढ्न रुचि राख्ने गरेको सर्वेक्षणले देखायो। ६० वर्ष माथिका भने १७ प्रतिशतले मात्रै यौन सामग्री पढ्ने गरेको जवाफ दिए। ३०.४ प्रतिशतले पत्र–पत्रिकामा छापिएका तस्वीर र सामग्री अश्लील भएकाले परिवारसँग बसेर हेर्न, पढ्न नमिल्ने र ३० प्रतिशतले मिल्ने बताएका थिए।
नेपाली समाज यौनका विषयमा उदार बन्दै जानुमा ३२.६ प्रतिशतले मोबाइल फोन र ३१ प्रतिशतले इमेल इन्टरनेटको मुख्य भूमिका रहेको बताए भने २०.६ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजनलाई कारक माने। इन्टरनेटलाई कारक भन्नेमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४०.२ प्रतिशत छन्। ६० वर्षमाथि ४५ प्रतिशतले मोबाइल फोनलाई समाजलाई खुला बनाउने कारक मानेका छन्। तपाईं यौन सम्बन्धी कोसँग खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ५९ प्रतिशतले साथीसंगीसँग भन्ने जवाफ दिए। साथीसंगीसँग यौनका कुरा गर्नेमा १८–२४ वर्ष उमेर समूहका ७१.३, २५–३९ वर्ष उमेर समूहका ६७.६ र ४०–५९ उमेर समूहका ४९.५ प्रतिशत देखिए।
टोल, छिमेकमा यौन सम्बन्धबारे बढी उदार (गर्लफ्रेण्ड/ब्वाईफ्रेण्ड बनाउने र यौनसम्बन्ध राख्ने, विवाहेत्तर सम्बन्धमा लाग्ने) मान्छे कत्तिको देख्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा ५२.७ प्रतिशतले अलि अलि देखेको र २०.९ प्रतिशतले धेरै देखेको बताए भने ५०.५ प्रतिशतले समाजले खुल्ला यौन गतिविधिलाई सहज रूपमा नलिएको, ३२.४ प्रतिशतले सहज रूपमा लिन थालेको बताए। १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५६.३ प्रतिशत र २५–३९ उमेर समूहका ५२.८ प्रतिशतले नेपाली समाज अझै परम्परागत रहेको बताए।
प्रहरीले होटलमा छापा मारेर यौनकार्यमा संलग्न भन्दै जथाभावी पक्राउ गर्नुलाई ३४.८ प्रतिशतले विकृति रोक्ने प्रयासका रूपमा लिए भने २१.४ प्रतिशतले नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारको हनन्को रूपमा अर्थ्याए। यसैगरी, १३.६ प्रतिशतले यसलाई प्रहरीको मनपरी भने। सर्वेमा सहभागी ५०.४ प्रतिशतले नेपालमा अलग्गै 'रेडलाइट एरिया' आवश्यक भइसकेको बताए, जसमा पुरुष ५९.१ प्रतिशत र महिला २८.९ प्रतिशत छन्। यसैगरी, २०.६ प्रतिशतले 'रेडलाइट एरिया' लाई अनावश्यक भने। 'रेडलाइट एरिया' आवश्यक ठान्नेमा १८–२४ वर्ष उमेर समूहका ५० प्रतिशत छन्। ६० वर्षभन्दा माथिका ७२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'रेडलाइट एरिया' तोक्न ढीलो भइसकेको बताए।
साभार : हिमाल साप्ताहिक
« Reply #9 on: February 28, 2018, 12:15:25 AM »
ध्वस्त यौन अखडा
पहिले नयाँ बसपार्क भनिने अहिलेको बाग्लुङ बसपार्क बाग्लुङ–पोखरा सडकमार्ग खुलेदेखि स्थापना भएको हाृ। बसपार्क सञ्चालनमा आएदेखि सुरु भएको यहाँको यौन व्यवसाय यतिबेला खलबलिएको छ। बाक्लो बस्तीबीच सञ्चालित बसपार्कमा हुने छ्यापछ्याप्ती यौन व्यवसायकै कारण यसलाई अघोषित ‘रेडलाइट एरिया’का रूपमा चिनिन्थ्यो। यो ठाउँ यौन अखडाकै रूपमा गनिन थालेपछि स्थानीयले प्रहरी प्रशासनसँगको सहकार्यमा त्यसविरुद्ध अभियान नै चलाए।
१५ वर्षदेखि होटलका नाममा यौन व्यापार गर्दै आएकी सिर्जना अहिले होटल बन्द गर्ने सुरमा छिन्। 'चार महिनादेखी सुको कमाइ छैन, पुलिस चौबिसै घण्टा बसेपछि को आउँछ र?’ ३८ वर्षीया उनी भन्छिन्, 'अहिले त भाडा तिर्न पनि मुस्किल छ। केटीहरू सब गइसके। यहाँ केटी देख्यो कि पुलिसले उठाइहाल्छ।’ प्रहरीले चौबिसै घण्टा पहरा दिन थालेपछि ग्राहक आउन छाडेको उनले बताइन्।
ग्राहक आउन छाडेपछि यहाँका अधिकांश सटर बन्द भएका छन्। यौन धन्दा चलाइएका धेरै सटर बन्द भइसके। बाँकी रहेका पनि बन्द हुने क्रममा छन्। 'होटेलका नाममा यौन क्रियाकलाप गर्ने सटर बन्द भइसकेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी वसन्त लामाले भने, 'अहिले यहाँको यौन बजारलाई रोक्न सफल भएका छौँ।’ आफ्नै छोरीचेलीसँग हिँड्नसमेत गाह्रो हुने अवस्था आएपछि स्थानीयको पहलमा यहाँको यौन बजारलाई भत्काउन सकेको एसपी लामाले बताए।
रेस्टुरेन्ट र होटल व्यवसायको आवरणमा बाग्लुङ बसपार्कमा खुल्लमुखल्ला यौन व्यवसाय भएपछि कास्की प्रहरी पहिलो पटक खरो रूपमा उत्रिएको हो। पोखरामा देह व्यापार गराउने होटल र रेस्टुरेन्टहरूको भित्री रूपमा संगठन छ। उनीहरूको यही जालो भत्काउन प्रहरीले निकै कडा मेहनत गर्नुपर्योट। अहिले यहाँ कुनै चहलपहल छैन। पहिले बाग्लुङ बसपार्कमा मात्रै मासिक ४५ देखी ५० हजार कन्डम बिक्री हुन्थ्यो भने पुलिसले निगरानी बढाएको चार महिनामा जम्मा ३ हजार ६ सय मात्र बिक्री हुनुले पनि यहाँको यौन बजार ध्वस्त भएको पुष्टि गर्छ। पश्चिमाञ्चलको एकमात्र कन्डम डिलर हेल्दी स्माइल इन्टरनेसनल नेपालका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव बरालले बाग्लुङ बसपार्कको यौनबजार पहिलो पटक पूरै ध्वस्त भएको बताए। 'बाग्लुङ बसपार्कमा मात्रै मासिक ५० हजार कन्डम बिक्री हुन्थ्यो,’ उनले भने, ' 'चार महिनादेखि महिनामा नौ सय कन्डम मात्रै बिक्री भएको छ।'
बरु अहिले बाग्लुङ बसपार्कको यौन बजार विस्थापित भएर पोखराका अन्य ठाउँमा विस्तार हुन थालेको छ। यौन बजारको गन्तव्यमात्र परिवर्तन भएको बताउँछन्, स्थानीय बासिन्दा। त्यहाँ बन्द भएर सेक्स वर्कर अन्त छरिएपछि समस्या झन् बढेको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले त फोनकै भरमा व्यवसाय चलाउने पनि छन्। होटल बन्द गरेपछि अहिले कोठा/फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन व्यापार गरेको पनि पाइएको छ।
सेक्सका अखडा बन्द भएपछि यौनकर्मीसँग सम्पर्क हुने एउटा उत्तम माध्यम बनेका छन्, एजेन्टहरू। विभिन्न रूप र शैलीमा भेटिने यी एजेन्टले यौनकर्मीसँग सम्पर्क गराइदिएकै भरमा मोटो रकम असुल्छन्। यहाँ पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म लिने यौनकर्मी छन्। जसको केही प्रतिशत एजेन्टले पाउँछन्।
यौन व्यापारकै कारण पोखराको सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व ओझेलमा पर्न लागेकोप्रति संस्कृतिकर्मी चिन्तित छन्। ‘यस्ता नकारात्मक गतिविधिले यहाँको सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व गौण होला भन्ने चिन्ता छ,’ संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो समस्या चाँडै निर्मूल पार्नुपर्छ।’
एसपी लामाका अनुसार अधिकांश यौनकर्मी युवती गाउ“ फकिर्सकेका छन्। केहीले पेशा परिवर्तन गरेका छन्। केहीले पोखराका विभिन्न स्थानमा फरक शैलीमा यौनधन्दा सञ्चालन गरेको रिपोर्ट उनीकहाँ आएको छ। 'हामीले मुख्य एरिया मानिएको बाग्लुङ बसपार्कलाई टार्गेट गरेका हौँ, अब त्यहाँ पहिले जसरी खुल्लमखुल्ला यौनधन्दा हुने काम ठप्प छ,’ उनी भन्छन्, 'तर, पेशेवर युवतीहरू पोखराका अन्य ठाउँमा गएर कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने खबर छ। त्यहाँ पनि हामी निगरानी बढाउँछौँ।' अहिले डेरा र फ्ल्याट लिएर यौन व्यवसाय चलाएकाहरूलाई खोजिरहेको उनले बताए।
साभार : नागरिक
Baglung_Buspark_ma_Police-02.jpg (82.21 kB, 600x400 - viewed 436 times.)